३ भाद्र २०७५, आईतवार ०८:५९ – janadristi
१५ बैशाख २०७८, बुधबार १६:३७, admin, No Comments
क्रान्ति शाह वीरगन्ज : कोरोना महामारीको हटस्पट बन्दै गएको वीरगन्जको अवस्था झन भयवाह बन्दै गएको छ । पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर पनि दिनहुँ बढ्दै गएको छ । वीरगन्जमा बुधबार मात्रै कोरोनाले ५ जनाको मृत्यु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत ५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो । वीरगन्जमा ३ दिन (सोमबार […]
२९ चैत्र २०७७, आईतवार ०३:१५, admin, No Comments
झण्डै तीन दशकअघि चोरी भएको बुद्धको आसनस्थ मूर्ति, गणेश र अप्सराको मूर्ति अमेरिका पुगेको प्रमाण मिल्यो । त्यो नेपालबाट चोरी भएको भन्ने दाबीमा नेपालले प्रमाण पुर्‍याएपछि अहिले सो मूर्ति अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अबको केही दिनमा सो मूर्ति नेपाल आइपुग्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ । त्यसलाई छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिने छ । […]
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १६:३३, admin, No Comments
२८ चैत, भक्तपुर । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को त्रासलाई भुलेर भक्तपुरबासी बिस्काः जात्रामा रमाएका छन् । कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जात्रा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनले नेवाः संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले जात्रा गर्न पहल लियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि २५ चैतमा बिस्काः जात्रा नरोक्न आन्तरिम […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:४९, admin, No Comments
विश्वभरका सरकारले आफ्ना नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे या नरहेको छुट्याउन भाइरसविरुद्ध लड्न शरीरले तयार पार्ने तत्त्व एन्टीबडीको परीक्षण गरिरहेका छन्। कतिपय देशहरूले ‘इम्युनिटि पासपोर्ट’ भनिएका कोभिड-१९ प्रतिरोधी प्रमाणपत्र भएका मानिसहरूको विवरण तयार पारिरहेका छन् र अरूले पनि त्यसै गर्न लागेका छन्। यो अवधारणा अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिला भएको तर उनीहरूले संक्रमण […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:४३, admin, No Comments
६ असार, रौतहट । रौतहटको गरुडा नगरपालिका मलाही टोलकी एक महिलालाई गएराति घरबाटै अपहरणको प्रयास भएको छ । आफ्ना छोराछोरीसँग रहेकी महिलालाई गएराति ९ बजे चार जनाको समूहले अपहरण प्रयास गरेका हुन् । महिलाका श्रीमान कामको सिलसिलामा गौरमा रहेको मौका छोप्दै चार जनाको समुहले अपहरणको प्रयास गरेको थियो । “घरमा बसिरहेको बेला अचानक चार जना […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:४०, admin, No Comments
काठमाडौं : जनता समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीविरुद्ध जन्म कैदको माग गर्दै जाहेरी परेको छ । महानगरीय प्रहरी टेकुमा शुक्रबार साझ अभिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराव जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको अभिवक्ता सन्तोष भण्डारीले जानकारी दिए। गिरीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ को (५ क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:३८, admin, No Comments
६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने । एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:०८, admin, No Comments
६ असार, वीरगञ्ज । बारामा शनिबार थप तीन जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका १८, १९ र ३८ वर्षका पुरुषहरुमा कोरोना पुष्टि भएको हो । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रयोगशाला स्रोतले बतायो । साभार :अनलाइनखबर अनलाइन
६ असार २०७७, शनिबार ०५:०७, admin, No Comments
टिप्पणी यतिबेला कोरोना भाइरसको कहरले विश्व आक्रान्त छ। बन्द राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेको र उदार लोकतन्त्रसहितको पुँजीवादी अमेरिका त्यसको भुंग्रोमा परिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर अमेरिकी मोडलको लोकतन्त्र र पुँजीवाद संकटमा पर्दै गइरहेको विश्लेषण सुरु भएका छन्। तर, कोरोनाको कहर सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाटै अमेरिकी मोडलको लोकतान्त्रिक पुँजीवादका कमजोरी र […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:०४, admin, No Comments
६ असार, काठमाडौं । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै […]
६ असार २०७७, शनिबार ०५:०२, admin, No Comments
अग्रिम अधिकारी आवाज ‘आई डन्ट ह्याभ इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स।’कुनै युवाले दरबारमार्गमा बर्डभाइजर पिउँदै भनेको थियो। ‘प्रेम र यौनमा बढी लिप्त’ युवा समूह समाजको कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्ने कुरा अन्योलमा छ। एसएलसी–एसईई पास गरेपछि प्लस टु अनि ब्याच्लर्सको संघारसम्म आइपुग्दा आजको युवा समूह नेटप्mिलक्समा रम्न थाल्यो। रंगीन जिन्दगीको झन् रंगीन सपनामा रुमल्लियो। अझ भनौँ, सपनाको […]
६ असार २०७७, शनिबार ०४:५८, admin, No Comments
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म आठ सय चार जनाको ज्यान गएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार चैत र वैशाखमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुई सय सात जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। फागुनसम्म पाँच सय ८१ पुरुष र १६ महिला गरी पाँच सय ९७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक […]
६ असार २०७७, शनिबार ०४:५६, admin, No Comments
६ असार, काठमाडौं । चिकित्सा अध्ययन गर्न चाहने १२ कक्षाका एक विद्यार्थीले आफ्नी आमाको उपचार तथा भाइबहिनीको विद्यालय शुल्कको लागि मानिसहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु गरेका छन् । उनले नाम चन्द मोहम्मद हो । उनकी आमा थाइराइडको अनियमितताको समस्या सामना गरिरहेकी छिन् । उनलाई अहिले तत्कालै उपचारको खाँचो छ । तर उनको उपचारका लागि […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:४२, admin, No Comments
अख्तियारमा नियुक्ति–कसरी, कस्तो ?
सूर्यनाथ उपाध्याय भ्रष्टाचार र त्यसविरुद्धको प्रयास समानान्तार रूपले रहिरहने भए पनि देश विकास गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमाथि विजय हासिल गर्नैपर्छ हालको अवस्थामा संवैधानिक निकायमा पद खाली छन्। त्यसमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर भएका व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशद्वारा परिवर्तन गरिएको र पुनस्र्थापित गरिएको विषय ताजै छन्। यो आमरूपमा चर्चाको विषय रहेको छ। यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:४०, admin, No Comments
पुस्कासलाई पछि पारे बेन्जेमाले म्याड्रिड : अनुभवी स्ट्राइकर करिम बेन्जेमाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि स्पेनिस ला लिगा फुटबलको आफ्नो पछिल्लो खेलमा रियल म्याड्रिडले सजिलो जित हात पारेको छ। घरेलु मैदानमा बिहीबार राति खेलिएको खेलमा स्पेनिस ‘पावर हाउस’ रियल म्याड्रिडले भ्यालेन्सियालाई ३–० गोलले हरायो। जितसँगै अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा आसीन रियल म्याड्रिडले ‘लिग लिडर’ बार्सिलोनामाथि चुनौती थप्ने काम […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:३७, admin, No Comments
सोनुको आक्रोश–‘फिल्ममा भन्दा ठूला माफिया म्युजिक क्षेत्रमा छन्’
बलिउडमा नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपश्चात ‘परिवारवाद’ र ‘समूहवाद’को विरोध भइरहेको छ । केही चलचित्र निर्माण कम्पनीले ‘परिवारवाद’ र ‘समूहवाद’ हाबी बनाएको आरोप दर्शक र केही बलिउडकर्मीले लगाइरहेका छन् । विभिन्न प्रोडक्सनको निर्माणमा बन्न लागेका ७ वटा चलचित्रबाट बाहिरिएपछि सुशान्त डिप्रेसनमा पुगेको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान पनि सुरु गरेको […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:३५, admin, No Comments
धरासयी बन्दै उड्डयन क्षेत्र
आम्दानी १ करोड, खर्च २५ करोड काठमाडौं : कोभिड १९ का कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रमा बन्दाबन्दीले गर्दा पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। मन्त्रालयकाअनुसार वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:३३, admin, No Comments
काठमाडौं । गुगल क्रोमका प्रयोगकर्तामाथि तीन करोड २० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको एक्सटेन्सनको माध्यमबाट जासुसी भएको खुलेको छ । अवेक सेक्युरिटीले गुगल क्रोमका प्रयोगकर्तामाथि भइरहेको जासुसी पत्ता लगाएको हो । गुगल क्रोमले आफ्नो ब्राउजरलाई यस्तो आक्रमणबाट बचाउन नसकेको शोधकर्ताहरुले बताएका छन् । मेल, पेरोल र अन्य संवेदनशील कामका लागि प्रयोग गरिने ब्राउजरलाई अल्फाबेटले बचाउन नसकेको […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:३१, admin, No Comments
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता कहिले ?
काठमाडौैं : संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिन्, असार २ मा। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले त्यसमा एकमतले समर्थन जनाए। सभापति श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्टै सचिवालयका तर्फबाट भन्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनेसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव गरिन्। त्यसले नेकपाका सांसदबीच नै विवाद खडा गरेको छ। विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा खुकुलो बनाउने […]
६ असार २०७७, शनिबार ०२:२९, admin, No Comments
हामीलाई केही न केही सानोतिनो समस्याले सताइरहेको हुन्छ । जस्तो कहिले कम्मर दुख्ने, कहिले रुघा लाग्ने, कहिले नाक बन्द भएर सास फेर्न गाह्रो हुने । यस्तो अवस्थामा औषधि खोज्ने कि त्यसको अरू विकल्प ? यी सामान्य समस्याहरूको हल योगासनबाट सहजै गर्न सकिन्छ। कतिपय योगासन यस्ता हुन्छन्, जो प्रभावकारी त हुन्छन् नै उत्तिकै सहज पनि हुने […]